डा. केसी सास फेर्न नसकेर आत्तिन थाले, बेलाबेलामा बर्बराउने समस्या – newslinesnepal
डा. केसी सास फेर्न नसकेर आत्तिन थाले, बेलाबेलामा बर्बराउने समस्या
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७५, बुधबार ०६:५०
काठमाण्डौ -जुम्लामा पुगेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सास फेर्न कठिन भएपछि डा. केसी आत्तिने गरेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार आइतबार रातिदेखि देखिएको श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको छ । मंगलबार बिहान चार बजेतिर डा. केसीलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो । अक्सिजनको मात्रा बढाएपछि उनको अवस्था केही सामान्य बनेको थियो ।
विगत १० दिनदेखि केसीको मुटुको चाल बढ्दो क्रममा छ । मुटुको चाल बढ्नु ठूलो खतरा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
यसैगरी स्लाइन चढाइएको हातमा संक्रमण देखिएको छ । यसले रगतको माध्यमबाट शरीरमा संक्रमण फैलन सक्ने खतरा बढाएकोछ ।
घाँटीमा देखिएको संक्रमणसमेत बढ्दो क्रममा छ । डा. केसीले कुनै पनि औषधि लिन नमानेका कारण स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।
मस्तिष्कमा देखिएको समस्याले बेलाबेलामा डा. केसी बर्बराउन थालेका छन् । त्यसैगरी शरीर बाउँडिने समस्याले डा. केसी थलिएका छन् । उनलाई चिकित्सकहरुले दिनहुँ फिजियोथेरापी सेवा दिइरहेका छन् ।
डा. केसीको रगतमा पोटासियमको मात्रा अत्यन्तै कम (हाइपोक्यालेमिया) देखिएको छ ।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने केसीको एजेण्डाका विषयमा भने सरकारले तत्परता देखाएको छैन ।
सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन नसकेको केसी पक्षको आरोप छ ।
यसअघि काठमाण्डौमा बसको वार्ता असफल भइसकेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सरकार सहमत नभएपछि १८ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता सहमतिबिनै टुंगिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता टोली गठन गरेसँगै राजधानीमा पटकपटक वार्ता भए पनि सरकारी वार्ता टोली चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पारित गरी छाड्ने अडानबाट टसमस नभएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। सरकारी वार्ता टोली बनेलगत्तै डा.केसी पक्षले पनि वार्ता टोली बनाएसँगै सोमबार साँझ पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो ।